Ị ga-esi heaven ma ọ bụrụ na ị na-egbu onwe ha? | Apg29
Ị ga-esi heaven ma ọ bụrụ na ị na-egbu onwe ha?
Norwegian Princess Martha-Louise si bụbu-di Ari Behn nwere gburu onwe na afọ 47.
Ị ga-esi heaven site igbu onwe ya? Achọrọ m na-akpa-iru na a nnọọ eziokwu dị mkpa: Ọ bụ bụghị otú ị anwụ na-ekpebi ma anyị na-aga eluigwe. The ikpebi ihe bụ ma ọ bụrụ na unu bụ ndị Jesus, ma ọ bụrụ na ị natara Ya dị ka Onyenwe.
On Christmas mgbede bịara ozi ọma na Norwegian Princess Martha-Louise si bụbu-di Ari Behn nwere gburu onwe . Ọ bụ afọ 47 ochie.
The Swedish omee Mikael Persbrandt ede na Instagram :
Rip. Karekare Ari, enyi m, anyị malitere ọnụ Trondheim na October. Ị na-eyi a ìhè n'ime unu, oge ochie spirit, a obere okpomọkụ, ugbu a, m na-aghọta na ọchịchịrị were gị, ọ na-ewute m otú ahụ. M ekpe ekpere maka unu, na m ekpe ekpere maka gị na ụmụ gị na ezinụlọ gị. Peace gị nwoke nwa. ♥ ️
Wutere omume na otu ugboro ọzọ m ga-eti na e nwere ndị na-eche otú ahụ nnọọ njọ nke na ha na-ahụ dịghị ụzọ. Ya mere, anyị ga-hụ na ndị mmadụ nwere ohere ịnụ banyere Jizọs mere na ha nwere ike inweta Ya-azọpụta.
Amaghị m ihe m banyere Ari Behn e azọpụta, ma m maara na Jizọs bụ ndị mmadụ bụ nanị olileanya. Ọ bụrụ na ị nwere Jesus, mgbe kụrụ ịdị adị nke dị iche iche ihe na i nwere Jesus gaa. Ọ chọrọ inyere, gwọọ, na nkasi obi.
Mikael Persbrandt ede, sị: "Ugbu a, m na-aghọta na ọchịchịrị were gị, ọ na-ewute m otú ahụ." Ọ bụ ọchịchịrị a na Jizọs ga-anapụta ndị na. Ka anyị nye mmadụ ibe anyị, Jesus Christ.
Ị ga-esi heaven ma ọ bụrụ na ị na-egbu onwe ha? E nwere ụfọdụ ndị nwere nsogbu na nke a. Hụrụ n'anya pụrụ nwere gburu onwe, na ị na-eche ma ọ bụrụ na ha na-na na na-arahụ heaven.
Achọrọ m na-akpa-iru na a nnọọ eziokwu dị mkpa: Ọ bụ bụghị otú ị anwụ na-ekpebi ma anyị na-aga eluigwe. The ikpebi ihe bụ ma ọ bụrụ na unu bụ ndị Jesus, ma ọ bụrụ na ị natara Ya dị ka Onyenwe.
Na-ekwe nkwa na paradaịs?
E nwere ụfọdụ ndị na-eche na ọ bụrụ na onye na-efega onwe ya elu na ikuku na bọmbụ belt na i nwere a-ekwe nkwa ebe ke paradise. Ọ dịghị, ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị ga-enwe a na-ekwe nkwa ebe n'eluigwe, mgbe ị ga-natara Jesus dị ka Onyenwe gị. Ma ọ bụghị ya, ị ga-aga eluigwe.
Ọ bụghị na ọ bụrụ na ị na-anwụ na a n'ụzọ pụrụ iche na-aga eluigwe. Ma ọ bụ ọ na ọ bụrụ na ị na-anwụ na ọzọ pụrụ iche ụzọ na-aga hell. Ọ dịghị, ihe na-ekpebi ma ị na-aga eluigwe ma ọ bụ hell bụ ma ọ bụrụ na i nwere Jesus ma ọ bụ.
Agaghị afụ ụfụ
Ma nke a apụtaghị na ọ bụ nanị igbu onwe otú ị ga-esi heaven. Nnọọ bụghị. Chineke achọghị ka ị na-emejọ onwe gị. Chineke hụrụ gị n'anya nakwa na o nwere atụmatụ maka ị.
E nwere ama ebe Ọrụ Ndịozi. Pọl na Saịlas ka a tụbara n'ụlọ mkpọrọ. Na mgbede ha na-abụ abụ n'abụ mgbe ndị mkpọrọ nọ na-ege. Mgbe ahụ a ga-enwe ala ọma jijiji, nkpọrọ olu ada oyi, na mkpọrọ ụzọ meghere.
-Elekọta ndị mkpọrọ bụ egwu na-eche echiche nke na-ewere ndụ ya na mma agha ya. Mgbe ahụ, Pọl na-eti mkpu, sị: Emerụla onwe gị, n'ihi na anyị niile nọ n'ebe a. Mgbe ahụ kwuru na-elekọta ụlọ mkpọrọ: Gịnị ka m ga-eme ga-azọpụta? Paul zara, sị: Kwere n'Onyenwe anyị Jizọs, a ga-abụ na ụlọ gị azọpụta.
Chineke chọrọ ka ị ga-azoputa
Chineke ga-ya mere na ị na-ekwesịghị igbu onwe ya. Ọ chọrọ ka ị ga-azọpụta. Ma ọ bụ naanị site na okwukwe na Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na ị ma tụgharịa ka Jizọs na-anabata ya, ị ga-eme ya.
Anata Jizọs na-ekwupụta na ọnụ gị, oké olu na-doo anya na ọ bụ Onyenwe anyị na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ. Mgbe ahụ ị ga-azọpụta ma azọpụta. All gbagharawo gị mmehie gị. Ị na-a nwa Chineke.
V 03, måndag 18 januari 2021 kl 08:02